Iyo iPhone 7 Jet Nhema yakashata sei? Tarisa uone mune ino vhidhiyo | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 Jet Nhema yakasviba sei? Tarisa uone mune ino vhidhiyo
Miguel Hernandez | | iPhone 7, IPhone Zviteshi
Hapana mubvunzo kuti iyo iPhone 7 iri kugadzira gakava rakawanda pamusoro pekunzwisisa kwezvinhu zvaro. Apple inonyevera pane yayo webhusaiti nezve zvingangoita kupfeka pachigadzirwa. Nekudaro, hapana vashoma vanhu vari kutora mukana weYouTube kuti vatibvise mukusahadzika nezvekunzwisisa kwayo. Ichokwadi chiri pachena, chakaomarara sezvataitarisira, zvinoita, zvinotora masekondi mashoma chete kuti ugamuchire wekutanga wemitsetse uri kuda kubuda kunze kwebhokisi.Unoda kuona kuti iro rakaomarara sei iro iPhone 7 iri? Enderera mberi, tinokuratidza iyi vhidhiyo iyo isingazokusiye iwe mune chero kukahadzika, kuisa iyo iPhone 7 kune zvinogoneka chaizvo abrasions.
Vhidhiyo yacho yakaiswa pane yeYouTube vhidhiyo chikuva nemushandisi JerryRigEverything, kuti zvijeke inoyemurika sei inoyevedza ichangoburwa iPhone iri. Iye akazvipira kukurumidza kuburitsa iyo iPhone 7 uye zvishoma nezvishoma kubvisa epurasitiki chisimbiso. Zviri pachena kuti inopenya zvakadii, ingangoita sekunge yaive girazi, asi usakanganwe, iyo inogadzirwa mune anodized aluminium, semidziyo yese yeApple simbi, nzira yekugadzira zvishandiso zvauchazoda kana kuvenga, iri kazhinji inopokana kupfuura mamwe marudzi ezvigadzirwa, zvisinei, iyo Jet Nhema inoita kunge yakanyanyisa kuomarara.
Paanongoburitsa kunze, anoshamisika anotambira kwekutanga kukwenya, zvinoita sekunge haana kuzviita nemaune, asi ndizvozvo. Ipapo Zack (iye mugadziri wevhidhiyo), mhanyisa meno ekumusoro pamusoro, uye zvinoita sekunge haina kukwenya, asi inogadzira micheka-midiki. Zvino, iko kutendeuka kwemari, anokwikwidza muhomwe. Mari iyi yatogadzira matambudziko akakura mupendi yeiyo iPhone 7, tisingataure nezve makiyi emotokari uye sikuruu, izvo zvakatoparadza zvachose kupenya kwezinga. Muchidimbu, kana iwe uri mushandisi ari kunetsekana zvakanyanya nechitarisiko chechigadzirwa chako, iyo iPhone 7 Jet Nhema haisi yako, nekuti handifunge kuti chishandiso chakagadzirirwa kuvharwa nekavha, pasina kupokana chinorasika iko kubata kwakakosha nekukurumidza kana butiro rayo ravharwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 Jet Nhema yakasviba sei? Tarisa uone mune ino vhidhiyo
Iwe murume, hauna kusimba, zviri pachena uye ini handisi kuzotenga nemagumo iwayo, zvakare…. asi, kunze kwekunge iwe usina kutakura dombo, pfuura screwdriver, riiteme nemucheki kana kukwiza mari ... ndinofunga matemu ese anokwenudzwa.
Chimwe chinhu ndechekuti inoneta nekuingoisa muhomwe yako, sekuverenga kwandakaita.
Dzimwe iPhone 7 uye 7 Plus dzinogona "hiss" mune mamwe mamiriro
Maitiro ekuvhura uye kudzima Meseji mhedzisiro muIOS 10